Ma Run baa In Canada Ay 1 Milyan Oo Qaxooti Ah Qaadanayso Sannadkan? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMa Run baa In Canada Ay 1 Milyan Oo Qaxooti Ah Qaadanayso Sannadkan?
Ma Run baa In Canada Ay 1 Milyan Oo Qaxooti Ah Qaadanayso Sannadkan?
Ottawa (Jigjigaonline) – Sheeko ku saabsan in ra’iisul wasaaraha Canada uu dalbaday dad qaxooti ah oo gaaraya 1 malyan oo ruux, oo uu doonayo in dad ka socda waddamo gaar ah ay imaadaan dalkiisa ayaa si weyn u sii faafeysa.
Dalalka Nigeria, Kenya, Zimbabwe, Zambia, Ghana iyo Philippines ayaa dhammaantood lagu sheegay inay yihiin kuwa qaxootigooda ay Canada aad u daneyneyso.
Warkan ayaa maalmahanba ku wareegayay bogagga internet-ka iyo baraha xiriirka bulshada.
Laakiin dhammaan sheekooyinkaas ma aha kuwo run ah.
Waa maxay waxa la sheegay?
Qormada la wareejinayay ayaa sheegeysay in Canada ay dalalka la xusay ka casuuntay 1 malyan oo ruux, arrintaasna ay qeyb ka tahay isbaddal cusub oo lagu sameeyay waaxda socdaalka.
Mid kamid ah website-yada ayaa ciwaan ka dhigtay: “Ra’iisul wasaaraha Canada oo ka baryay madaxweynaha Zambia inuu usoo diro 1 malyan oo qaxooti ah”.
Sawirka sheekadaas lagu lifaaqay oo ah madaxweynaha Zambia iyo safiirka Canada oo is gacan qaadaya waa sax, laakiin ciwaanka ayaa ah mid gabi ahaanba khaldan oo uusan waxba ka jirin.
Xafiiska socdaalka ee dowladda iyo waaxda qaxootiga iyo adeega muwaadiniinta ee Canada(IRCC) ayaa sheegay in yabooh noocaas ah aan la sameynin.
Ciwaan kale oo kaas la mid ah ayaa muujiyay sheegasho ku saabsan in Canada ay hal malyan oo qaxooti ah ka dalbatay dalal kale oo Afrikaan ah iyo Philippines.
Siduu warkan u fiday?
Sheekooyinkan ayaa lagu tilmaamay kuwo been abuur ah, laakiin waxaa laga abuuray war goor sii horreysay kasoo baxay dowladda Canada oo sheegayay in waaxda socdaalka ee dalkaas ay qorsheyneyso inay soo jiidato qaxooti gaaraya hal malyan oo ruux, muddada saddexda sano ah ee soo socota.
Hase yeeshee, qorshahaas laguma xusin dalal gaar ah oo muwaadiniintooda la bartilmaameedsanayo.
Dalka Nigeria, sheekada noocan ah ayaa markii ugu horreysay laga maqlay bishii Abriil, kumannaan qof ayaana kusii faafiyay Facebook-ga.
Waxaa durba sii shaaciyay dad si weyn loogu xiran yahay barahooda xiriirka bulshada.
Dadka ka fal celinayay qaarkood ayaa fahmayay inay been tahay laakiin dad kale oo badan ayaa codsanayay in loo sheego qaabkii ay codsigooda u dirsan lahaayeen, si loogu qaado Canada.
Sidey Canada uga jawaabtay?
Safaaradaha Canada ee dalalka Nigeria iyo Kenya ayaa dadka uga digay inay rumeystaan wararkaas been abuurka ah.
“Haddii aad sheekooyinkan ku aragtay baraha bulshada, ha aaminin. Warkan ma aha run. Waa been abuur”, ayaa lagu yidhi bayaan ay safaaradda Canada ee Nigeria soo dhigtay barteeda Twitter-ka.
Balse ma aha markii ugu horreysay ee la faafiyo in Canada ay dooneyso qaxooti ka socda dalka Nigeria.
Bishii Maarso, mas’uuliyiinta Canada ee ku sugan Nigeria ayaa dadka uga digay in khiyaanaan dad sheeganayay inay si hubaal ah u geynayaan Canada.
Sarkaal ka tirsan waaxda qaxootiga iyo adeegga muwaadiniinta ee Canada ayaa BBC-da u sheegay inay marar badan arkeen wararka noocaas ah.
“Markii ay warar been abuur ah soo baxaan, sida kuwan, waxaan uga jawaabnaa si deg deg ah waxaana dadka u caddeynaa inaan lagu khiyaanin”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Waa sidee xaaladda dhabta ah?
In ka badan 6 malyan oo qaxooti ah ayaa Canada tagtay tan iyo sanadkii 1990-kii, waxaana sanadihii dambe sii kordhayay tirada dadka ee tagaya waddankaas.
Codsiyada lagu doonayo muwaadinnimada Canada ayaa sare ugu kacay 130% laga billaabo bsihii Oktobar ee sanadkii 2017-kii ilaa bishii Juun ee sanadkii 2018-kii.
Oggolaanshihii dagganaanshaha ee Canada laga bixiyay sanadkii 2017-kii
Dalalka Nigeria iyo Philippines ayaa ka mid ah 10-ka waddan ee dadka ugu badan ay ka qaabishay Canada.
Dowladda Canada ayaa qaxootiga u qaadaneysa si ay ula tacaasho hoos u dhaca tirada muwaadiniinteeda, oo qaarkood ay sii gaboobayaan, iyagoo doonaya in la helo jiil cusub oo shaqooyinka la wareega.
Qorshaha hadda socda ee ay Canada qaxootiga ku qaadaneyso ayaa lagu doonayaa in sanadkan 2019-ka gudihiisa ay waddankaas tagaan dad gaaraya 330,800 oo qof, halka sanadka 2020-ka ay Canada damacsantahay inay qaabisho qaxooti gaaraya 341,000.
Sidoo kale tiradaas ayaa la filayaa inay kororto sanadka 2021-ka ayna gaarto 350,000 oo ruux.
Qaxootiga cusub ee la qaabilayo ayaa tirada shacabka dalkaas ka noqon doona 1%.
Ciidamada Kenya Oo Guriga Ugu Dhacay, Jeelkana U Taxaabay Aqoonyahanka Caanka Ah Ee Bursaliid